त्रुटि 0x80070141: सबै तपाइँ जान्न आवश्यक छ मोबाइल फोरम
त्रुटि 0x80070141: सबै कुरा तपाइँ जान्न आवश्यक छ
डेनियल टेरासा | 09/09/2021 09:00 | Windows
त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरु छन् Windows जो कहिल्यै उहाँ संग गर्न को लागी भएको छ त्रुटि 0x80070141, जो एक बरु चिन्ताजनक सन्देश संगै छ: उपकरण उपलब्ध छैन (यन्त्र पहुँच योग्य छैन अंग्रेजीमा)।
धेरै जसो समय, यो त्रुटि देखा पर्दछ जब हामी केहि कार्यहरु को कार्यान्वयन गर्न को लागी प्रयास गर्दछौं। उदाहरण को लागी, जब हामी मोबाइल फोनको क्यामेरा बाट कम्प्युटरमा JPEG फाइल खोल्न, प्रतिलिपि गर्न वा सार्न कोसिस गर्छौं, यद्यपि यो अन्य परिस्थितिहरुमा पनि देखा पर्न सक्छ।
वास्तव मा, त्रुटि 0x80070141 एक प्रणाली त्रुटि हो कि अधिक बारम्बार हुन्छ जब हामी केहि विशिष्ट उपकरणहरु लाई हाम्रा उपकरणहरु लाई जोड्दछ। को iPhones 6/7/8 / X / XS र XR ती मध्ये केहि हुन्। तर यो उचित छैन iPhones लाई यस तरीकाले इंगित गर्न को लागी, कम से कम विशेष रूप बाट होइन। कहिलेकाहीँ हामी केहि मा एकै समस्या मा चलाउन सक्छौं एन्ड्रोइड स्मार्टफोन ब्रान्डहरु जस्तै सैमसंग ग्यालेक्सी वा लेनोभो। जब पनी एक प्रमुख बाधा उत्पन्न हुन्छ जब पीसी मा फाइलहरु हस्तान्तरण, प्रसिद्ध "उपकरण उपलब्ध छैन" सन्देश हाम्रो स्क्रीन मा देखा पर्नेछ।
र यद्यपि यो सबैभन्दा सामान्य हो, कष्टप्रद त्रुटि कोड 0x80070141 को कारण पनि देखा पर्न सक्छ अन्य उद्देश्यहरु। उदाहरण को लागी, जब त्यहाँ एक क्षतिग्रस्त उपकरण हो वा ड्राइभरहरु लाई गलत तरिकाले स्थापित गरीएको छ। वा जब हाम्रो उपकरण भाइरस को केहि प्रकार बाट प्रभावित हुन्छ।
यो थप्नु पर्छ यो समस्या विन्डोज को एक निश्चित संस्करण को लागी अद्वितीय छैनयो संस्करण,, 7१ र १० मा दर्ता गरीएको छ सौभाग्य देखि, त्यहाँ यसलाई समाधान गर्ने थुप्रै तरिकाहरु छन्।
1 त्रुटि 0x80070141 किन हुन्छ?
2 त्रुटि 0x80070141 फिक्स गर्नुहोस्
2.1 सबै विन्डोज अपडेट स्थापना गर्नुहोस्
2.2 हार्डवेयर र उपकरण समस्या निवारक
2.3 फरक USB पोर्ट प्रयोग गर्नुहोस्
2.4 फाइल नाम छोटो गर्नुहोस्
2.5 एक मिडिया उपकरण (MTP) को रूपमा जडान
त्रुटि 0x80070141 किन हुन्छ?
त्रुटि 0x80070141 किन हुन्छ? हामी कारण र सम्भावित समाधान को विश्लेषण
एक बिट सब थोक हो कि अब सम्म उजागर गरीएको छ, हामी भन्न सक्छौं कि त्रुटि 0x80070141 विभिन्न कारणहरु र बिभिन्न कारणहरु को लागी हुन सक्छ। मोटो रूप मा भन्न को लागी, यो एक अनुकूलता समस्या हो, यद्यपि यो पनी एक गलती को कारण हुन सक्छ, सामान्यतया थोरै महत्व को, कि हामी बेवास्ता गर्न सक्षम छौं।
यो को एक सानो सूची हो सम्भावित कारणहरू यो त्रुटि को:
अभिलेख धेरै ठुलो। विन्डोज 256 वर्णहरु भन्दा बढि नाम वा पथ संग फाइलहरु प्रशोधन गर्न सक्दैन।
फाइल एक्सप्लोरर त्रुटि। रिपोर्ट गरिएका धेरै मामिलाहरुमा त्यहाँ फाइल एक्सप्लोरर मा एक असफलता छ कि यो एक मोबाइल फोन को रूप मा बाह्य भण्डारण उपकरण को कुनै पनी प्रकार को साथ एक स्थिर जडान कायम राख्न बाट रोक्छ।
माइक्रोसफ्ट हटफिक्स स्थापना गर्न आवश्यक छ। त्रुटि 0x80070141 मा अधिक घटना संग पत्ता लगाइएको छ विन्डोज 10, त्यसैले माइक्रोसफ्ट एक हटफिक्स (वा प्याच) जारी गर्न को लागी यो समस्या को समाधान गर्न को लागी निर्णय गरीयो।
दोषपूर्ण USB पोर्ट.
MTP बाहेक अन्य स्थानान्तरण प्रोटोकल। यदि हामी एक एन्ड्रोइड उपकरण बाट फाइलहरु प्रतिलिपि गर्न को लागी कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ, यो हुन सक्छ कि त्रुटि हुन्छ किनकि स्थानान्तरण प्रोटोकल MTP को रूप मा कन्फिगर गरिएको छैन।
यी मात्र सबै भन्दा साधारण र सामान्य कारणहरु हुन् कि हाम्रो कम्प्युटर मा परेशान त्रुटि 0x80070141 को उपस्थिति को व्याख्या गर्दछ, यद्यपि त्यहाँ धेरै धेरै छन्। अर्को हामी यसलाई सम्बोधन गर्न को लागी सबैभन्दा उपयोगी तरीका हो भनेर सम्बोधन गर्न जाँदैछौं।
त्रुटि 0x80070141 फिक्स गर्नुहोस्
सबै विधिहरु कि हामी तल सूची मा जाँदैछौं समान रूपले त्रुटि को समाधान गर्न को लागी यो पोष्ट सौदा गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागी उपयोगी छ। जे होस्, यसको प्रभावकारिता समस्या को मूल को आधार मा उच्च वा कम हुनेछ। एक राम्रो तरीका यो प्रश्न दृष्टिकोण गर्न को लागी क्रम मा उनीहरु मध्ये प्रत्येक को कोशिश गर्न को लागी हामी उनीहरुलाई प्रस्तुत गर्न को लागी हो:
सबै विन्डोज अपडेट स्थापना गर्नुहोस्
त्रुटि 0x80070141 समाधान गर्न विन्डोज अपडेट गर्नुहोस्
कुनै पनी अन्य समाधान को कोशिश गर्नु अघि, यो जाँच को लायक छ कि विन्डोज पहिले नै तपाइँको समस्या को एक समाधान प्रदान गर्दछ, किनकि यो पक्कै पहिले नै अन्य प्रयोगकर्ताहरु बाट धेरै रिपोर्टहरु प्राप्त गरीएको छ। यो मात्र यो विशेष त्रुटि को लागी सत्य हो, तर लगभग सबै त्रुटिहरु को लागी हुन सक्छ।
समाधान को रूप मा आउँछ प्याच (हटफिक्स) र यो सीधै हाम्रो कम्प्यूटर मा माइक्रोसफ्ट बाट नवीनतम अपडेटहरु को स्थापना पछि लागू गरीन्छ। अपडेट पछि तपाइँको कम्प्यूटर पुन: सुरु गर्न को लागी याद गर्नुहोस् कि सबै कुरा सामान्य रूप बाट काम गर्दछ र यस प्रकार यो कष्टप्रद त्रुटि को लागी अलविदा भन्नुहोस्।
हार्डवेयर र उपकरण समस्या निवारक
संग त्रुटि 0x80070141 समाधान गर्नुहोस् विन्डोज हार्डवेयर र उपकरण समस्या निवारक।
यो त्रुटि को सबै भन्दा साधारण कारणहरु मध्ये एक एक हामीले अघिल्लो सूची मा उद्धृत गरीएको छ: एक फाइल एक्सप्लोरर दुर्घटना जुन अपरेटि system सिस्टम को लागी एक बाह्य भण्डारण उपकरण संग एक स्थिर जडान स्थापित गर्न को लागी बनाउँछ। सौभाग्य देखि, धेरै अवसरहरुमा Windows तपाइँ तपाइँको आफ्नै तरीका संग समस्या को समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।
विधि मात्र समावेश गर्दछ हार्डवेयर र उपकरण समस्या निवारक चलाउनुहोस्। यस तरिका मा, प्रणाली जडित उपकरण को जांच, स्थिति को आकलन र अन्त मा एक सम्भावित समाधान को सिफारिश गर्दछ। यहाँ कसरी अगाडि बढ्ने, चार सजिलो चरणहरुमा छ:
हामी एक "रन" विन्डो खोल्न विन्डोज + आर कुञ्जीहरु थिच्नुहोस्। पाठ बक्स मा हामी लेख्दछौं "सुश्री सेटिंग्स: समस्या निवारण" र इन्टर थिच्नुहोस्। यो संग यो खुल्नेछ "समस्या निवारण" विन्डो.
यसमा, हामी विकल्प को लागी तल हेर्नेछौं "फेला पार्नुहोस् र अन्य समस्याहरु लाई ठीक गर्नुहोस्" (एक एक रिंच को प्रतिमा संग सचित्र) र मा क्लिक गर्नुहोस् "हार्डवेयर र उपकरणहरु".
त्यसपछि हामी क्लिक गर्दछौं "समस्या निवारक चलाउनुहोस्" सन्दर्भ मेनुमा देखिन्छ। प्रक्रिया केहि सेकेन्ड र मिनेट पनि लाग्न सक्छ।
अन्तमा, विन्डोज हामीलाई एक प्रस्ताव गर्दछ समाधान। सिद्धान्त मा, एक समस्या को सामना गर्न को लागी प्रकार को लागी उपयुक्त छ। यसलाई स्वीकार गर्न र यो सुरु गर्न को लागी, हामी थिच्नु पर्छ "निवेदन गर्नु"।
समाधान को लागी लागू गर्न को लागी यो आवश्यक हुनेछ तपाईको कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्। यदि समस्या बनी रहन्छ र त्रुटि 0x80070141 पर्दा मा देखा पर्न जारी छ, हामी निम्न विधि को कोशिश गर्नु पर्छ।
फरक USB पोर्ट प्रयोग गर्नुहोस्
ल्यापटप को USB पोर्ट
त्यहाँ समयहरु छन् जब हामी एक समस्या को मूल को लागी पागल जान्छौं, सबैभन्दा जटिल समाधान को कोशिश गरीरहेछ। र तब हामी बुझ्छौं कि यसलाई समाधान गर्ने तरीका हामीले सोचेको भन्दा सरल छ। त्रुटि 0x80070141 को मामला मा यो मा हुन सक्छ USB पोर्ट.
यो घटना धेरै धेरै बारम्बार मानिसहरु कल्पना भन्दा धेरै छ। अक्सर, जडान पोर्ट कुनै पनी सही तरिकाले जोडिएको छैन (र त्यो त्रुटि उत्पन्न गर्दछ)। यो पनि हुन सक्छ कि हाम्रो कम्प्युटर को पोर्ट जसमा हामी बाह्य उपकरण लाई जोडिएको छ प्रसारण को समर्थन गर्न को लागी पर्याप्त शक्ति छैन।
तर सावधान रहनुहोस्, कहिलेकाहीँ विफलता मात्र विपरीत हुन सक्छ: एक USB 3.0 पोर्ट यन्त्रहरु संग यस्तो USB जडान मा काम गर्न को लागी आवश्यक ड्राइभरहरु छैनन् संग जडान को लागी अनुपयुक्त हुन सक्छ।
यी मामलाहरु मा समाधान सरल तर्क हो: तपाइँ मात्र USB पोर्ट बाट यन्त्र डिस्कनेक्ट गर्न को लागी छ र यसलाई फरक पोर्टमा जोड्नुहोस्। पक्कै यो गरे पछि र जाँच गरीयो कि यो काम गरीएको छ हामी सोच्नेछौं "यो कसरी मलाई पहिले नहुन सक्छ?"
फाइल नाम छोटो गर्नुहोस्
यो समस्या को लागी एक राम्रो समाधान हुन सक्छ। र यो हो कि केहि अवसरहरु मा कारण यो त्रुटि हुन्छ कि विन्डोज को प्रबंधन को लागी कोशिश गरीरहेको छ धेरै लामो नाम संग एक फाइल। यदि हामी नजिक बाट हेर्छौं, धेरै पटक हामी उनीहरुको नाम मा अक्षरहरु र संख्याहरु को एक अनन्त उत्तराधिकार संग फाइलहरु संग काम गर्दछौं।
यदि त्यो समस्या हो, त्यहाँ चिन्ता गर्न को लागी केहि छैन, समाधान को रूप मा छिटो को रूप मा यो सजिलो छ। यो प्रश्न मा फाइल को नाम परिवर्तन गर्न को लागी पर्याप्त छ। लक्ष्य २५256 वर्ण सीमा भन्दा बढि छैन। त्यसोभए फाइल को नाम कसरी संक्षिप्त गर्ने? हामी यसलाई सही माउस बटन संग क्लिक गर्नुहोस् र को विकल्प छनौट गर्नुहोस् "नाम बदल्नुहोस्".
यदि यो त्रुटि को लागी कारण थियो, नाम संक्षिप्त संक्षिप्त समाधान हुनेछ।
एक मिडिया उपकरण (MTP) को रूपमा जडान
एक मिडिया उपकरण (MTP) को रूप मा जडान 0x80070141 त्रुटि को लागी एक समाधान हुन सक्छ
त्यहाँ सुन धेरै बारम्बार मामला मा त्रुटि 0x80070141 देखा पर्दछ। यो हुन्छ जब तपाइँ प्रयास गर्नुहुन्छ एक एन्ड्रोइड उपकरण बाट एक विन्डोज कम्प्यूटरमा फाइलहरु प्रतिलिपि गर्नुहोस्। यी विशेष मामिलाहरुमा, स्थानान्तरण प्रोटोकल गलत व्याख्या गर्दछ कि एक क्यामेरा जोडिएको छ। यो सूची को अन्त्य मा मामला हो कि हामी सबैभन्दा सामान्य त्रुटि कारणहरु को बारे मा माथि प्रस्तुत गरीएको छ। यो बाधा पार गर्न को लागी हामी मिडिया ट्रान्सफर प्रोटोकल मा कार्य गर्नु पर्छ (मिडिया ट्रान्सफर प्रोटोकल वा MTP)।
एक धेरै आधारभूत तरीका मा व्याख्या, एमटीपी यो एक कम्प्युटर को लागी एक मल्टिमिडिया उपकरण मा मोबाइल लाई बदल्ने प्रभारी हो। यसको कार्य महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले हामीलाई संगीत फाइलहरु, अडियो रेकर्डि,, भिडियो र पीसी बाट मोबाइल को फोटोहरु को उपयोग गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
एक पटक त्रुटि अवस्थित छ, हामी पहिले नै समाधान छ। यो स्थानान्तरण प्रोटोकल परिवर्तन र यस प्रकार हाम्रो कम्प्यूटर को लागी "आँखा" खोल्न को लागी हुन्छ। यो अपरेशन गर्न को लागी हामी पर्दा को शीर्ष मा डाउनलोड मा कर्सर सार्नु पर्छ, क्रम मा दृश्य मा हाम्रो वर्तमान USB जडान को विवरण छ। प्रकट हुने मेनुमा, हामी मात्र गर्न को लागी छ मिडिया उपकरण (MTP) चयन गर्नुहोस्। यो त्रुटि समाधान हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » Windows » त्रुटि 0x80070141: सबै कुरा तपाइँ जान्न आवश्यक छ
के यो 2021 मा Nintendo स्विच किन्न लायक छ?